အကောင်းဆုံး အမြင့်ပင်လယ်အော် LED ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး အမြင့်ပင်လယ်အော် LED ကိုရှာဖွေရန်။
SHINYU LIGHT CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ အမြင့်ပင်လယ်အော် LED သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးမတူကွဲပြားသောဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လူနေအိမ် applications များအများအပြားအမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်ပုံစံများအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - U5 LED High Bay Light 180-250W 56°/ 95°
မြင့်မားသော lumin ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကိုအာမခံရန် Excellent LEDs ကိုအသုံးပြုသည်,မဟုတ်ဘူး-တောက်တဲ့ရိုနှင့်အနိမ့်အလင်းယိုယွင်း.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/led-high-bay.html
အကောင်းဆုံး အမြင့်ပင်လယ်အော် LED ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် အမြင့်ပင်လယ်အော် LED မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ